Ikhaya soda amathini ukuze elizenzekelayo
Ogogo nomkhulu abafundi lanamuhla nostalgically khumbulani izinsuku lapho yonke indawo imizi eyayimi dispensers amanzi. Ngoba kufike umuntu mumbe zingabantu penny, olubilayo ngokujabula, batheleka ingilazi turning ethafeni amanzi carbonated, futhi ngodenariyu ke wathembela kakhudlwana futhi ingxenye isiraphu. Soda walithanda ngokuphelele konke - kokubili abadala kanye nezingane, naphezu kweqiniso lokuthi amanzi kwaba aphume Imininingwane amanzi, ngenxa yanoma yisiphi izihlungi okwamanje akekho wezwa. Kanye nomqondo babethenga amanzi asemabhodleleni kwakuyinto engacabangeki. Okukhishwayo kuphela lamanzi esiphethu.
Ngalezo zinsuku, imikhaya eminingi kwaba idivayisi elula efana USiphon. Kuyini lokhu? Yebo, ulapho. Awazi? Kodwa nokho, yena wayengazange kusukela ngaleso sikhathi, lapho soda ye-apharathasi efanayo baphuza ngisho ugogo wakho. Futhi cartridges for USiphon bheka nse njengakuqala.
Idivayisi ngokwawo umfuma ingilazi, ivikelwe plastic noma insimbi emgodleni, anoma amabili amalitha. Ilungiselelwe ngekhava umnikazi ukuba isitsha Umfutho noma uketshezi-carbon dioxide. Kusukela isembozo esibuthakathaka labetibambile hose, okuyothi ngalo igesi ageleze ngaphakathi. Thela isitsha amanzi isikulufa Friend cap, a cartridges ipensela ufaka i USiphon futhi ibenze isigwedlo. inaliti Special lihlaba imbobo liner, futhi emanzini ngaphansi eqinile ingcindezi gas injected. Amanzi kumnandi hisses futhi foams batheleka ingilazi. Lapha, empeleni, nakuyo yonke isakhiwo.
Ukusebenzisa USiphon kungenzeka ukulungiselela sebuningini iziphuzo esihlwabusayo esekelwe amanzi carbonated. Nawa ethela nje-ke kudingeka amanzi. Ayikho juice noma izithelo iziphuzo noma izithelo iziphuzo e asikwazi amanye. Uma ufuna amanzi isiraphu, bese ufaka isiraphu noma ujamu ngqo ingilazi.
Ingabe unentshisekelo idivayisi elula kangaka, futhi ufuna ukwazi lapho ukuthenga USiphon? Esikhathini esithile esidlule, ukugcwalisa lesi sifiso ungakwazi yini. Ingabe lokho, egijima kwi "izimakethe zigcwele" sasizotholakala ukudayiswa siyindlala. Ukuthenga, khona-ke ngabe bazophoqeleka ukufuna kakhudlwana futhi ifake uphethiloli ke. Kodwa manje bavele futhi emakethe, ngisho bheka ngendlela ngaphambili. Ngisho amathini ukuze elizenzekelayo ingashintshiwe futhi ziqukethe konke okufanayo 8-10 namamililitha -carbon dioxide.
Lokhu ngenhlanhla zingavumi kakhulu, kusukela awunazo 10 ml ilitha lamanzi kuphela ngayinye. Futhi ekuphatheni kwabo kudinga ikhono. Ngenxa yokuthi igesi therein ucindezelwa okusezingeni eliphezulu, ingozi eliphezulu ukuqhuma uma unganakile yokukhipha sidle kuze kube sekupheleni igobolondo. Ngakho-ke, izingane ezikahle hhayi ukunikeza ezandleni kule divayisi, uwathele soda yabo.
By the way, cartridges for USiphon akuyona zalutho. Abakwazi unikwe garaji. Okuningi ngokunembile, ukushintsha udoti okufakiwe ezintsha, ngenkokhelo yebo. Ngiyavuma ukuthi kuwusizo kakhudlwana futhi ezishibhile njalo ukuthenga iphakethe lawo elisha. Futhi ngakho - uya ukusebenzisa futhi uzihlanganyele for abasha. Le sevisi ethandwa kakhulu, kanye nezinkampani namuhla eziningi zinikeza exchange futhi refilling cartridges esetshenziswa.
Yiqiniso, ukuthenga kanye exchange of amathini, kungcono uzithatha yinkampani efanayo oye ekhiqizwa yena elizenzekelayo. Iqiniso lokuthi abanayo indinganiso olulodwa emhlabeni, kanye ibhaluni ukuze elizenzekelayo kusuka kwenye umakhi angase nje ingalungeli kudivayisi yakho. Kungase, isibonelo, kungabi obuphelele efanelekayo, ubukhulu, nentambo iphimbo noma iboshiwe. Futhi ukuzisebenzisa kuyoba nzima hhayi kuphela, kodwa futhi ziyingozi.
Ikhishi izinto Delimano. Izibuyekezo umthengi
Ubucwebe: ukunethezeka nsuku zonke
"Panasonic" multivarka. abanikazi Izibuyekezo
Indlela yokubhekana a Hangover?
Parkur- "Maynkraft" - yalo mklamo omusha ojabulisayo